Orida - Wikipedia
Orodyahani waa calaamad muuqata oo ku taalla aagagga sarraysa iyo muuqaalka adduunka oo idil. Waxaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan iyo qaababka la aqoonsan yahay ee samada habeenkii. Wa loo magacaabay Orion, oo ah nin ugaadhsi ah oo ku dhexjiray ereyga Giriigga. Xiddigihiisa ugu quruxda badan waa Rigel (Beta Orionis) iyo Betelgeuse (Alpha Orionis), buluug-caddaan ah iyo midab casaan ah, siday u kala horreeyaan.
Marka la barbardhigo taariikhda Muslimiinta, Orion waxaa loo yaqaan al-jabbar, "wayn". Orida waa xiddiga lixaad ee ugu quruxda badan, Saiph, waxaa lagu magacaabaa Carabiga, saif al-Jabbar, oo micnaheedu yahay "seefta weyn".
Taariikhda Asia. Dalka Shiinaha, Orion wuxuu ka mid ahaa 28-ta qaboobaha Sieu (Xiu) (宿). Waxaa loo yaqaan 'Shen', macnaheedu waa "saddex", xiddigaha Orion's Belt. (Fiiri shibbada Shiinaha) Muujinta Shiinaha ((pinyin shēn) asal ahaan waxa loola jeedaa Orodyahanka Orion (Shiine:; p; pinyin: shēnxiù); oo ah seddex kun oo sanno jir ah, wuxuu ka kooban yahay sarjirta saddexda xiddigood ee suunka Orion ee madaxa nin (qaybta ugu hooseysa ee matxafka ereyga ayaa lagu daray ka dib).
Rig Veda waxaa loola jeedaa Isbahaysiga Orodka sida Mriga (The Deer). Waxaa la yiraahdaa laba xiddigood oo iftiin ah oo horay iyo laba xiddigood oo iftiin ah ee ku yaala waa eeyaha ugaadhsiga, mid ka mid ah xiddigaha yar yar ee iftiinka ah ee dhexda ku yaal iyo ka horeeya laba eey oo horay loo yaqaan 'The hunter iyo saddex xiddig oo iftiin leh ayaa ku jira bartamaha Dhammaan afartan eygu waa Goobjoogaha (The Mriga) iyo saddex xiddigood oo yaryar oo aan habooneyn, hase yeeshee xiddigo yaryar leh waa Goobta Ilmaha. Mriga waxaa loola jeedaa Deer, oo loo yaqaan 'Harnu' oo ah xeeldheer dadweyne. Waxaa jira heeso badan oo dad ah oo ku hadlaya Harnu. Malaaqa waxaa loogu yeeray Orion 'Belt Bintang Tiga Beradik ('Saddex Brother Star').
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Orida&oldid=221032"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 24 Oktoobar 2021, marka ee eheed 13:10.